आगामी बुधवार देखी कोरियाका सिनेमाहल हरु सुचारु हुने ! – Korea Pati
April 26, 2020 April 26, 2020 गुरुदत्त न्यौपानेLeaveaComment on आगामी बुधवार देखी कोरियाका सिनेमाहल हरु सुचारु हुने !
सोल-कोरोना संक्रमणका कारण कोरियाको चलचित्र क्षेत्रमा परेको असर कम गर्न आगामी बुधवारबाट केही सिनेमा हलहरु सञ्चालनमा ल्याईने भएको छ । शुक्रवार कोरियाको सबै भन्दा ठूलो मल्टिप्लेक्स सञ्चालक सिजिभीले गत एक महिनाबाट बन्द रहेका आफ्ना ३६ सिनेमा घरहरु सञ्चालनमा ल्याउने भएको हो । कोरोना संक्रमणका कारण तहसनहस भएको
देशको अर्थतन्त्रलाई उकास्न पनि अब हरेक क्षेत्रका आर्थिक गतिविधि सुरु गरिनुपर्ने मल्टिप्लेक्स व्यवसायीहरुले बताएका छन् । पहिलो चरणमा म्यङ्गदोङ्ग , डेयाङ्गो लगायतका राजधानी सोलको केन्द्रमा रहेका मल्टिप्लेक्सहरु खोल्न लागिएको हल सञ्चालकहरुले बताएका छन् । ठूलो मनोरञ्जनात्मक संस्था सिजे ग्रुपको
मातहमा चल्ने सिजिभी मल्टिप्लेक्सका देशभर ११६ वटा हलहरु रहेका छन् जसमध्ये ३६ वटा हलहरु बन्द छन् । हल ब्यवसायी, निर्माता तथा निर्देशकहरु सँगको संयुक्त सहकार्यमा हल सञ्चालन गर्न लागिएको हल प्रतिनिधिले बताए । कोरियाली सरकारले लागु गरेका कोरोना नियन्त्रण निर्देशिकाको अक्षरस्स पालना गर्दै हलमा उपलव्ध गराईने टिकट व्यवस्थापन गरिने सञ्चालकहरुले बताएका छन् ।हटपाटीबाट